May nwere ike ịchọpụtala na otu n'ime njikọ m na nso nso a Ask.com na Live esonyela na Sitemaps ọkọlọtọ. Okwu sitemap bu ihe ngosiputa nke oma - obu uzo nke igwe nyocha iji weputa webusaiti gi nfe. A na-ewu saịtị saịtị na XML nke mere na ha nwere ike iri ngwa ngwa site na mmemme. Enwere m Stetheet etinyere m na saịtịmap nke mere na ị pụrụ ịhụ ihe ọmụma na-ẹdude.
na WordPress, Ọ dị mfe iji machiini ma wuo saịtị saịtị gị. Naanị wụnye ya Ntanetị Google Sitemap. Ana m agba ọsọ 3.0b6 nke ngwa mgbakwunye ọ dịkwa mma. Emechara m gbanwee ngwa mgbakwunye ahụ wee gbakwunye nkwado nnyefe Ask.com yana. Edenyela m mgbanwe m na onye nrụpụta ma nwee olile anya na ọ ga-agbakwunye ha ma wepụta nsụgharị ọzọ.
Ihe karịrị 50% nke nleta m na-adị kwa ụbọchị si Google mana ahubeghi onye obia si Ask.com! Ahụrụ m aghụghọ Yahoo! ndị ọbịa na ole na ole Live ọbịa… ma ọ dịghị Ask.com ọbịa. Na ịlele ụfọdụ nsonaazụ ọchụchọ Ask.com, ọtụtụ n'ime ha na-ele anya agadi (na mgbe ụfọdụ afọ) na-ezo aka na ngalaba Aha ochie m na isiokwu ochie. Ikekwe nke a bụ isi ihe kpatara na Ask.com anaghị enweta okporo ụzọ ọ bụla? Onwere onye n’ime gị jiri Ask.com?